कम गफाडी छैनौँ हामी “छोटे ओलीहरू” पनि – BRTNepal
रामप्रसाद खनाल २०७६ पुष २५ गते २३:३५ मा प्रकाशित
सातौँ पटकमा बल्ल तल्ल अमेरिकाको ३ महिने भिजिट भिसा प्राप्त गरेका एक जना साथी अमेरिका आए । भिसाको म्याद हुँदा सम्म अमेरिका बसे । यहाँ आफन्त कोही नभएका उनले साथीभाइहरू सँग भेटे, एक जना नेपाली इमिग्रेसन लयर सँग पनि भेटे । म पनि ग्रीनकार्ड लिन्छु यतै बस्छु त्यसका लागि के के गर्नु पर्छ ? के गरौँ ? सोधे । केही गरे पनि उनको ग्रीनकार्ड को बाटो खुल्ने नदेखे पछि उनी नेपाल फर्के । नेपाल पुग्ना साथ एउटा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भनेछन् – म अमेरिका, त्यहाँको सुख सुविधा, ग्रीनकार्ड सब त्यागेर नेपाल फर्किएँ । मलाई नेपाल नै प्यारो छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बोलाएर ग्रीनकार्ड दिन्छु भने पनि म अमेरिका जान्न अब । त्यो साम्राज्यवादी देशमा को जान्छ । मलाई चाहिएन अमेरिका ।
भएछ के भने अमेरिकाबाट फर्केको तेस्रो दिन उनले फेरी अमेरिकी राजदूतावास गएर भिसा अप्प्लाई गरेछन् । सात दिन पछि भिसाको लागि अन्तर्वार्तामा बोलाएछ राजदूतावासले । भिसा कन्सुलरले अन्तर्वार्तामा सोधेछन् – तपाईँ त अमेरिकाबाट फर्केर नेपाल आएको १० दिन पनि भएको छैन फेरी किन र केको लागि अमेरिका जान चाहनुभएको हो ? उनी झसङ्ग भएछन् । उत्तर दिँदा अक्मकिएछन । अनि कन्सुलरले भनेछन् – तपाईँ अमेरिकाबाट फर्किनुहुन्छ भन्ने आधार के छ लिएर आउनुस् । पासपोर्टमा ड्याम्म रिजेक्ट छाप हानिदिएछन् । साथी फेरी हिम्मत गरेनन् राजदूतावास जान । अनि अमेरिका र राष्ट्रपति ट्रम्पका बारेमा बेला बेला बरबराउँदै स्टाटस ठोक्छन । अस्ति इरानले इराक स्थित अमेरिकी आर्मी बेसमा मिसाइल दागेको थाहा पाएपछि साथीले लेखेछन् – अमेरिकी साम्राज्यवादलाई घुँडा टेकाउनै पर्छ, सबै मिलेर अमेरिकालाई हराउनुपर्छ । इरानले जे गर्‍यो ठिक गर्‍यो । यस प्रकारको स्टाटसको अर्थ के ??
स्मरण रहोस् अमेरिकामा ग्रीनकार्ड लिँदैमा यहाँको पासपोर्ट पाइँदैन । ग्रीनकार्ड लिएको पाँच वर्ष पछि विभिन्न सर्त पुरा गर्दै अन्तर्वार्ता पास गरेपछि बल्ल अमेरिकन सिटिजनशिप लिन पाइन्छ त्यसपछि बल्ल अमेरिकन पासपोर्ट लिन पाइन्छ । ती समाजसेवीले अर्को ३ वर्ष पछि बल्ल सिटिजनशिप एप्लाई गर्न पाउँछन् । सिटिजनशिप एप्रुभ भयो भने बल्ल अमेरिकन पासपोर्ट एप्लाई गर्ने हो । यस्तो अवस्थामा उनको स्टाटस र नेपाली पासपोर्ट सो को के अर्थ ??
अनि तिनै मित्रले कहिले काहीँ मेरै लेख, स्टाटसहरुमा ट्वाँट लागेर जङ्ग बहादुर उत्रेपछि कमेन्ट लेख्छन् ” खनालजी, अर्काको देशमा बसेर, अमेरिका बसेर तपाईँ नेपालका कुरा गर्ने ? हिम्मत छ भने नेपाल आएर राजनीति गर्नुस् ।” एक पटक त उनले विदेशमा बस्ने नेपालीहरू नेपाली होइनन्, नेपालका भए त नेपाल मै बस्थे, यही केही गर्थे भनेर पोस्ट्याउन समेत भ्याएछन् । उनी यती सम्मका बाठा छन् कि हामीहरूका लेख, बिचार, स्टाटसहरुमा सबैले देख्ने गरी माथि उल्लेख गरे झैँ कमेन्ट लेख्छन् । गाली गर्छन् । तर भोलि पल्ट मेसेन्जरको इन्बक्समा लेख्छन् – हिजो बेस्सरी दारु खाएको थिएँ । जङ्ग बहादुर उत्रिएको बेला के लेखेँ कुन्नि ! माइन्ड नगर्नु ल ! अब भयो ! यस्ता ” नेपाली ” लाई के भन्नु !!
अहिले इरान र अमेरिकाको तनावले कतै छोएको छ भने त्यो हाम्रो नेपाल र हामी नेपालीलाई छोएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको महाभियोगको चर्चा पनि हामी र हाम्रै देशमा बढी छ । बेला न कुबेला भेनेजुएला त हुँदै भैगो ! तर अहँ हामीलाई याद छैन प्रचण्ड र बाबुरामको दश बर्से आतङ्कको कालो इतिहास । भुलिसकेका छौँ सत्र हजार लासहरूका कथाहरू । पटक्कै याद छैन चुनाव अघि प्रचण्ड र ओली काकाले गरेका बाचा बन्धन । सम्झना हुने कुरै भएन शेर बहादुर, कमल थापा, उपेन्द्र यादवहरू र अरू धेरैहरूका कहानीहरू ।
के गर्नु तपाईँ हामीलाई भएर जलन !!
माथि उल्लेखित नेपाली प्रवृत्तिहरू देख्दा लाग्छ म कैयौँ शताब्दी अघिको त्यही पुर्खा ढेँडु हुँ जसको पुच्छर मात्र नभएको हो अहिले । यो युग मेरो हुँदै होइन । म बुझ्दिन यो युगलाई । म जान्दिन यो युगलाई अन्माउन । म जस्ता पुच्छर मात्र नभएका ढेँडुहरुको के काम यो युगमा । देखेको बोल्ने, सत्य कुरा बोल्ने, न्यायको पक्ष र अन्यायको विपक्षमा बोल्ने, दुई जिब्रे कुरा नगर्ने म र म जस्ता ढेँडुहरुलाई राम राम भने पनि कसैले काँध थाप्ने कुरै भएन नि ! कि कसो हजुर ?